Rhapsody of Realities shona
Chitoko English Manyika Ndau Shona
Taura Mashoko Akafanira
Svondo, 5 Kubvumbi 2020
"Endai namashoko, mudzokere kuna Jehovha, muti kwaari: Bvisai zvakaipa zvose, mugamuchire zvinhu zvakanaka, ipapo tichakupai miromo yedu, zvive zvibayiro zvedu" (Hosea 14 ndima 2).
Mashoko akakosha. Mumashoko ndimo mune zvinhu zvose. Kuda ungataura mashoko. Unenge uri kutoronga ramangwana rako. Unenge uri kutoronga gwara rehupenyu hwako. Une mashoko awakataura. Mashoko aya ndiwo akakuita zvauri nhasi. Ndiwo akakuumba. Saka ndiwe unoronga hupenyu hwako. Hungava hunofadza. Hungava husingafadzi. Ungava uri kusangana nematambudziko. Zvinhu zvingava zvakakuwomera. Saka ungataura mashoko. Mashoko aya haafaniri kunge ari okuwedzera matambudziko aya. Haafaniri kuakurudzira kugara. Taura semunhu akakunda. Taura kuti uri kukunda. Taura mashoko akafanira.
2 Madzimambo 4 ndima 8 kusvika 36 ine nhoroondo yainotipa. Unogona kunge wakamboverenga nhoroondo iyi. Inhoroondo yemumwe mudzimai. Aigara mudunhu reShunemi. Akafirwa nemwanakomana wake. Akabva amhanyira kuna Erisha. Erisha aiva muprofita. Mudzimai uyu haana kusvika achichema. Haana kusvika akatsamwa. Akasvika achiti, "Zvinhu zvangu zviri kufamba zvakanaka". Akataura mashoko akafanira. Nokudaro, akawana zvaaida kuna Mwari. Zvinhu zvake zvakanga zvisina kumira zvakanaka. Asi izvi hazvisi izvo zvaaiudza vanhu. Aivaudza zvinotaura Mwari. Izvi ndizvo zvatinovona muna Isaya 3 ndima 10. Inoti, "Udzai vakarurama kuti zvakavanakira ..." (KJV).
Iwe ungataura mashoko. Mashoko aya ndiwo anokuunzira zvinhu. Hazvina imwe nzira yazvinouya nayo. Zvinhu zvinounzwa nemashoko. Aya mashoko aunenge wataura iwe. Izvi ndizvo zvakataurwa naJesu. Tinozviverenga muna Marko 11 ndima 23. Mudzimai weShunemi uyu akataura mashoko. Akati zvinhu zvake zvakanga zviri kufamba zvakanaka. Zvinhu zvake zvakabvavo zvafamba zvakanaka. Sarudza kutaura mashoko akafanira. Saka gara pfungwa dzako dziri paShoko raMwari. Ndiko kuti ugone kufunga nemazvo. Ndiko kuti mupfungwa dzako muve nezvinhu zvakanaka. Izvi ndizvo zvinozoita kuti ugone kutaura zvakafanira. Shoko raMwari rinovandudza pfungwa dzako. Rinosuka pfungwa dzako. Zvekare, rinoisa rutendo mumoyo mako.
Ndiko kusaka uchifanira kugara uchiwadzana neShoko raMwari. Shoko iri rinofanira kugara mukati mako. Rinofanira kunge rakawanda. Izvi ndizvo zvinotaura VaKorose 3 ndima 16. Rega Shoko iri rikutonge. Ngarizare mumoyo mako. Ndiko kuti rigobuda nepamuromo pako. Izvi ndizvo zvatinoziviswa muna Mateo 12 ndima 34. Shoko rakadai ndiro rinokurira zvinhu. Ndiro rinoita kuti ubudirire. Ndiro rinoita kuti ukunde. Ndiro rinoita kuti ufume.
Mwari vakatoronga kuti ukunde. Vakaronga kuti ubudirire muhupenyu. Chako kungobvumirana navo chete. Taura semunhu akarongerwa hupenyu hwakadai. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa muna VaHeberu 13 ndima 5. Une hupenyu hunoshamisa. Chitanga kutaura semunhu ane hupenyu hwakadai. Taura kuti uri mhare. Taura kuti une kubwinya kukuru. Taura kuti uri kurarama hupenyu hwekururama. Taura kuti uri kukurira zvinhu zvenyika ino. Muzita raJesu Kristu.
Ndinotaura mazano aMwari. Handitauri mazano enyika ino. Handitauri mazano emachinda enyika ino. Mazano aya haana chaanobudisa. Mazano aMwari ndiwo anonzwikwa mumashoko angu. Ndiwo anovonekwa muzviito zvangu. Ndinobvumirana neShoko raMwari. Ndinotaura semunhu akarigamuchira. Nokudaro, Shoko iri rinokurira. Rinoita kuti hupenyu hwangu hujeke. Rinowedzera kubudirira kwangu. Rinowedzera kukunda kwangu. Rinowedzera fuma yangu. Mwari ngavapiwe mbiri yose!
Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi
1 VaKorinte 2 ndima 6 kusvika 7
Zvirevo 18 ndima 21
(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Shona)
Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.
Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages
Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch
Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)